သုံးလုံခြုံဆုံးနှင့်အပြန်လည်သုံးသပ်အကောင်းဆုံးမိမိကိုယ်ကို balancing ဆိုင်ကယ် - Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
အဆိုပါ hoverboard သူတို့ပျော်ရွှင်န့်အသတ်ရရှိခဲ့နှင့် hoverboard စီးနင်းအပေါ်ခံစားနိုငျသောကွောငျ့, ပိုမိုနုပျိုသောလူကကြိုဆို, ဒါပေမယ့်ဘယ်လောက်လုံခြုံမိမိကိုယ်ကို balancing Scooter ရွေးချယ်ဖို့လဲ? အခုတော့သင်တို့အားငါလုံခြုံဆုံးသုံးခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးမိမိကိုယ်ကို balancing Scooter အကြံပြုကြကုန်အံ့။ ပထမဦးဆုံးတဖြစ်ပါတယ် KOOWHEEL အမှတ်တံဆိပ် ကိုယ်ပိုင် Balance ဘုတ်အဖွဲ့ K7 ul 2272 အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် LG စမတ်ဘက်ထရီအတူ။ အဆိုပါ2ဘီးကိုယ်ပိုင်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်းစကူတာ K7 Bluetooth ကိုဘီးနှစ်ဘီး 8.5inch ကောင်းမွန်သော ကိုယ်ပိုင်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်းစကူတာ Hoverboardသငျသညျ သာ. ကောင်း၏အတွေ့အကြုံကိုဆောင်တတ်၏ Hummer- အစိုင်အခဲတာယာ! ဒါဟာသော်လည်းငွေဖောင်းပွမှုမှာဖြစ်ခြင်း, သင်ဆဲမညီမညာဖြစ်နေသောအနေအထားအပေါ်တုန်ခါမှုတွေအများကြီးခံစားမိပါလိမ့်မယ်မဟုတ် 8.5inch ဘီးဖုန်နှင့်မြက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင်စိတ်ကူးရှိပါတယ်, ကပိုပြီးအစွမ်းထက်မော်တာသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြု, အခြား hoverboards ထက်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာပါရှိပါတယ်။ အပြည့်အဝတစ်ရက်သို့မဟုတ် roving ပြီးနောက်ကြှနျုပျတို့သညျဤ hoverboard တစ် 15-20km ရနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ၎င်း၏အများဆုံးအလျင်တစ်နာရီ 12km မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ may ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုမျက်နှာပြင်နှင့်ထအပေါ်ခရီးကြောင့်အစွမ်းထက်မော်တာမှလိုစိတျ။ ဒါဟာလုံးဝကိုသင်သွားလာရသောကျော်ကြမ်းပြင်များကဟန့်တား, ချောမွေ့စွာတယောက်ကိုတယောက်အရပ်မှသင်တို့ကိုယူမှော်အလားအလာပါပဲ။ အဆိုပါ hoverboard အတော်လေးရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ပညတ်တော်တို့ကိုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အဲဒါကိုဆုပ်ကိုင်ဖို့ရှည်လျားယူမထားဘူး။
နောက်ထပ်ဖွင့်လှစ် KOOWHEEL Self-ဟန်ချက်ညီ hoverboard dual-ဘလူးတုသ်နှင့်အတူ K5 UL2272 နှင့် ASTM လက်မှတ်များနှင့်အလင်းအိမ် LED ။ ဒါဟာအစကိုရောက်စေဖို့အလွန်လွယ်ကူအလယ်တန်းအတွက်လက်ကိုင်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါနည်းပညာ, ရွေ့ပြောင်းဖွဲ့စည်းပုံ, အများကြီးလျော့နည်းကြိုးတွေပိုလုံခြုံ, အများကြီးနိမ့်ချွတ်ယွင်းမှုနှုန်း (တထောင်နှုန်း 3) နှင့်ပိုမိုတည်ငြိမ်တွင်။ ဤသည် Self-ဟန်ချက်ညီ hoverboard နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်၏အလျှပ်စစ်ဘက်ထရီမယ့်သူကစောင့်ရှောက်အဖြစ်မြို့မှာနေရာတိုင်းမှာ go ရသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်မူထူးခြားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ လက်-အခမဲ့စက်ဘီးဟာနေ့တိုင်းအလုပ်နှင့်တူတာဝန်များကို, ဒြေသို့မဟုတ် anyplace အခြားညာဘက်တစ် placid နှင့်ပြည့်စုံပါဝင်ပတ်သက်မှုသို့လှည့်နိုင်ပါတယ်ခြင်းဖြင့်သွားအတူ။
Koowheel သည်နောက်ကျသည့်ဖြန့်ချိ ခေါက်လျှပ်စစ် Scooter developer များအလွန်အကောင်းဆုံးဆန်းသစ်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့မူပိုင်ဆန်းသစ်ဖက်ရှင်အေးမြဒီဇိုင်းနှင့်အတူ။ ၎င်း၏ LED Display ကိုမျက်နှာပြင်လုံးဝဘက်ထရီနှင့်မြန်နှုန်းပြသပါ။ အလင်းကိုရှိသော်လည်းလုံ့လရှိသူ။
ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, အ Segway hoverboard နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများနှင့်အပန်းဖြေအတွက်ဘုန်းကြီးသောလိုအပ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ Segway, ကျယ်ပြန့်စျေးကွက်အတွက်မြောက်မြားစွာ mobility လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းငှါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုမှလွှဲပြောင်းလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ကြောင်းနှင့်မော်တော်ယာဉ်များမှအစားထိုးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြောင်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့အစီရင်ခံစာကျော်ကြားသော။